Ronaldo oo Wajahaya Dacwad Kufsi - Worldnews.com
Booliska gobolka Nevada ee dalkaan Mareykanka ayaa si rasmi ah u weydiistay booliska dalka Talyaaniga in uu tijaabada hidasidaha loo yaqaano DNA ka qaado xidiga kooxda Juventus iyo xulka Portugal Cristiano Ronaldo. ...
Xiddiga kubadda cagta, Cristiano Ronaldo ayaa heshiis ku soo afjaray dacwad uga socotay maxkamad ku taalla magaalada Madrid ee dalka Spain, taasoo ku heysatay eedeymo ku...
Kooxda Juventus ayaa ku guuleystay koobka Super Cup-ka dalka Talyaaniga kaddib marki ay xalay fiidkii 1-0 uga badisay AC Milan. ......
Buuraha Waqooyiga Sanaag Oo Noqday Hoygii Dahabka Ee Xiligan Tan iyo Markii Buuraha Waqooyiga Gobolka Sanaag Ee Ay Kamidka Buuraha Cirshiida Dhicir iyo Buurta Ceel Dibir...
Ayaanle Nuur, oo ah Wiil 17 sano jir ah, oo qaxootinimo dalkan Mareykanka ay waalidiintiis kusoo galeen ayaa ka helay deeq Waxbarasho Jaamacadda Yale oo ka mid ah...
Hay’adda FBI-da Mareykanka ayaa xirtay nin la tuhunsan yahay inuu taageero kooxda Daacish, oo sida la tuhmayo qorsheynayey inuu gantaallada lidka taankiyada ku weeraro Aqalka Cad ee Mareykanka. Ninkan oo lagu magacaabo Hasher Jallan Taheb oo degan magaalada Cumming ee gobolka Georgia, ayaa wakiilada FBI-da waxay arbacadii ku xireen meel u dhow magaalada Atlanta. Waxa uu...
Dublamaasi Mareykan ah oo kulan la yeeshay kooxda Taliban
Kooxda Taliban ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in wadahadalo ay kula yeesheen dalka Qadar danjiraha Mareykanka ee dalkaasi, Zalmay Khalilzad. Arrintan ayay Taliban ku dhawaaqeen saacado uun ka dib markii ay fuliyeen weerar ay dad kud hinteen. Dadaalada waadaxaajoodka ayaa dhawaan hakad galay ka dib markii Washinton ay ka biya diiday kooxda Daalibaan oo iyagu sheegay ina ysan...
Qatar oo ka adkaatay Sacuudi Carabiya
Xulka kubadda cagta ee dalka Qatar ayaa 2-0 uga adkaaday dhiggiisa uu xifiltanka weyn kala dhexeeyo ee dalka Sacuudi Carabiya, ciyaar ka tirsaneyd Koobka Qaramada Aasiya. Kulankaasi oo xiisa gaar ah lahaa, isla markaana loogu magac daray "Blockade Derby" ama kulanka adag ee go'doominta, ayaa waxa ay labada xul ku tartameeyeen hogaanka guruubka E. Almoez Ali oo asal ahaan ka soo...
Ethiopia oo diyaarisay weerar aargoosi oo ka dhan ah Al Shabaab
ADDIS ABABA - Taliska ciidamada Itoobiya ayaa ka hadlay weerar dhabagal ah oo ay Al Shabaab Jimcadii, 18-ka bishaan, kula beegsatay askartooda qayb ka ah AMISOM aaga Mooda-mooday ee duleedka Buur Hakaba oo ka tirsan gobolka Baay. Weerarka oo dhashay dagaal fool ka fool ah ayay Al-Shabaab sheegatay inay ku dishay ku dhowaad 60 askar. War qoraal ah oo kasoo baxay taliska ayaa...
SYRIA - Isbaheysiga Mareykanka uu hoggaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda Daacish, ayaa billaabay hanaan ay uga soo baxayaan dalka Syria, sida uu maanta sheegay afhayeen u hadlay. Madaxweyne Donald Trump ayaa bishii tagtay ku dhawaaqay go’aan uu kusoo saarayo 2,000 oo askari oo Mareykan ah, oo dalka Syria u jooga inay ciidamada Kurdish-ka ay hogaamiyaan ka caawiyaan la...
Waxaa toddobaad laga joogaa markii kooxda Al Shabaab ay weerartay dhsimaha DusitD2 ee magaalada Nairobi, halkaas o ay ku dhinteen dad gaaraya 21 qof. Xarakada Al-Sabaab ee uu fadhuigeedu yahay dalka Soomaalia ayaa dhawaan sare u qaadday weerarradeeda iyadoo dhanka kalena ay waayadii dambe sii xoogeysanayeen dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah Al-Shabaab. Maalmihii la soo dhaafay,...